Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Umculi Wakha futhi Athengise Izidumbu Ezenziwe Ngezandla zikaChucky noBilly Mogwai
by UTrey Hilburn III November 11, 2020
by UTrey Hilburn III November 11, 2020 19,892 ukubukwa
Akuyona nsuku zonke ukuthi uMogwai untshontshe inhliziyo yakho. Kepha, namuhla ngolunye lwalezo zinsuku. Umdwebi we-Etsy wenze umsebenzi omangazayo we-cross-over universe Izingane zokudlala, Saw futhi Gremlins lokho kusishiye simangele. Udaba lwethu njengamanje lukuthola ukuthi imaphi kula ma-dudes okumele sibe nawo kuqala.
Umdwebi we-Etsy, u-Oili Varpy udala labonodoli abahle abenziwe ngezandla baseMogwai abahlanganiswe ngokucophelela futhi bahlelwa ngokwezifiso. Uma ubheka ngemisebenzi yakhe, ngaphezu kwemiklamo kaBilly the Puppet noChucky unenqwaba yabanye.
Abanye babo bathatha ithuba lokuthakazelisa futhi bacabange iGremlin efomu laseMogwai. Ubuye abe nokuhlanganiswa okuthandekayo kweBaby Yoda kuhlanganiswe neMogwai. Kukhona noyedwa phakathi lapho osinikeza okungathí sina Aahh !!! Izilo Zangempela kudlidlizela.
Okukodwa kwalokhu kwenziwa uku-oda futhi ngakunye kuthatha okungenani amasonto ayi-10 ukwenza bese kuthunyelwa ngomkhumbi. Umkhawulo wesikhathi kulokho awumuhle neze uma ubheka ikhwalithi engamangalisa oyothola.
Konke lokhu kuyamangalisa. Ukunakwa kwemininingwane kulokhu ngakunye kuyaphawuleka. Ukwengeza kulokho angizange ngicabange ukuthi kukhona ukwahlukahluka kukaBilly the Puppet okungaba yile drobz elahlekile.
Ucabangani mayelana nokudalwa kuka-Oili Varpy's Mogwai? Sazise esigabeni sokuphawula. O, futhi uma ugcina ukuyothenga naye mtshele iHorror sent ya! Ukubheka isitolo esigcwele IKHANDA LAPHA.
Bheka lolu Lwesihlanu oluhle lwezinto eziyi-13 ongazithenga ku-Etsy.